#Madagascar : Fitaterana – Mihena ny hofana fiara voaray | ONG Lalana Blog
#Madagascar : Fitaterana – Mihena ny hofana fiara voaray
Ny tsy fivakian’ny mpamily loha amin’ny fiara iasany no mite­raka faty antoka ho an’ireo tompona fiara. (Photo : Hery Rakotondrazaka)
Mahatsiaro ho maty antoka tanteraka ny mpampanofa fiara fitaterana. Mihena hatramin’ny 50% ny vola voarain’izy ireo.
Voafetsy. Ny atsasaky ny vola hofana fiara sisa ankehitriny no tonga any amin’ny tompona fiara fitaterana mpampanofa izany. Ankoatr’izay dia ataon’ny mpamily sy ny mpanampy azy an-tsirambina ny fikojana ny fiara amin’ny andavanandro, hany ka tsy mifanatsahana ny vola mivoaka hikarakarana izany sy ny vola miditra. Tsy mivaky loha amin’ny fiara ny mpamily ary maka tombony mihoa-pampana izy ireo sy ny mpanera. Vokatr’izany dia velon-taraina noho ny faty antoka mahazo azy ny tompona fiara eto an-drenivohitra (UCTU) sy ny manodidina UCTS).
« Lasan’ny mpanera ny 40%-n’ny vola hofana fiara ary anjaran’ny mpamily kosa ny 10% amin’izany. Ny atsasaky ny hofana fiara izany sisa no tonga any am-pelatanan’ny tena tompona fiara », raha ny nambaran-dRakotondrazaka Fenosoa, filohan’ny kaoperativa Kofafiava amin’ny zotra H.
« Isan’ny mahatonga ny faty antoka ho an’ireo tompona fiara ankehitriny ny tsy fikarakaran’ny mpamily sy ny mpanampy azy ireo ny fiara. Mifoha maraina amin’ny 4 ora izy ireo dia mandeha miasa mitaona anana sy legioma eny Anosibe. Tsy diovin’izy ireo akory ny fiara rehefa avy manao izany izy ireo fa avy dia miasa manao fitateram-bahoaka. Rehefa fenon’izy ireo indray ny vola tadiavin’ny tompon’ny fiara dia mijanona tsy miasa intsony izy ireo, fa mandeha manao ny ataony. Na miasa ihany fa maka tombony », hoy kosa ny fanamarihana nataon-dRakotoarimanana Fidi­malala, filohan’ny UCTS.
Ny fitadiavana izay sitrany ahay no voalazan’ireo mpamily fa antony mahatonga azy ireo hanao izany fihetsika feno hafetsena izany.
Manoloana izany dia mamolavola sampana mpanara-maso omena ny anarana hoe Astus na fanatsarana ny filaminan’ny fitaterana an-drenivohitra sy ivelan’Antananarivo ny kaominina, ny sampandraharaha miasahana ny fitaterana an-tanety (ATT), ny UCTS ary ny UCTU.
« Olona ivelan’ny sehatry ny fitaterana no homena andraikitra manokana hanara-maso ny hadalàn’ireo mpamily. Hiakatra filankevi-pifehezana ireo mpamily tratra manao hadalana ka hosaziana », raha ny fanampim-panazavana azo avy amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny.
Mbola ao anatin’ny famolavolana ny fametrahana io sampana mpanara-maso io ankehitriny ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny.